Ukunciphisa iziphumo ezibi ze-COVID-19 kuKhenketho ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ukunciphisa iziphumo ezibi ze-COVID-19 kuKhenketho ngoku
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, wenze intetho kwi-XXV Inter-American Congress yaBaphathiswa kunye namaGunya aphezulu oKhenketho namhlanje, nge-6 ka-Okthobha ka-2021. kwezoKhenketho: Inkuthazo nenkxaso yeenkampani ezinxulumene nokhenketho.
I-Jamaica ngaphambili yazisile ngezicwangciso zikarhulumente kunye neenzame zokunciphisa ifuthe elibi lobhubhane kwicandelo lezokhenketho.
Urhulumente waseJamaican ubeke phambili uncedo kumashishini amancinci, amancinci naphakathi.
Ungenelelo loMphathiswa kwesi sihlandlo lujolise ekubalulekeni kwezitofu zokubuyisela uqoqosho lwehlabathi nokhenketho.
Inikwe apha intetho kaMphathiswa uBartlett:
Enkosi, Madam Sihlalo.
Abathunywa baseJamaica, kwiintlanganiso zangaphambili ze-OAS kunye ne-CITUR, bazisile ngezicwangciso zikarhulumente kunye neenzame zokunciphisa ifuthe elibi lo bhubhane icandelo lezokhenketho. Oku kudlule kumanyathelo ethuba elifutshane kunye nelide anje ngendawo eyomeleleyo yokhenketho ukugcina imisebenzi yokhenketho yecandelo kunye ne-J $ 25 yezigidigidi yovuselelo kuqoqosho olubanzi, nolwabiwo lweNkxaso-mali yoKhenketho ukunceda amashishini asebenza kwicandelo. ichaphazele yi-COVID-19. Urhulumente waseJamaican ubeke phambili uncedo kumashishini amancinci, amancinci naphakathi, eqonda ukuba la mashishini angumqolo kuqoqosho lwaseJamaican.
Ukungenelela kwam kwesi siganeko kuya kugxila kwenye into ebaluleke kakhulu ekubuyiseleni uqoqosho lwehlabathi kunye nokhenketho—zokugonya. Sigxininisa umnxeba, ngoJuni walo nyaka, ziNtloko zeNgxowa-mali yeMali yeHlabathi (i-IMF), iBhanki yeHlabathi (i-WB), uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) kunye noMbutho wezoRhwebo weHlabathi (i-WTO) yotyalo-mali lwe-US $ 50 yezigidigidi kwisitofu sokulingana Ukusasazwa okunokuvelisa i-US $ 9 trillion kwimbuyekezo zoqoqosho lwehlabathi ngowama-2025. Abathunywa bam bakholelwa ngentliziyo yam yonke ukuba “akusayi kubakho kubuyiselwa kwimeko ebanzi ngaphandle kokuphela kwengxaki yezempilo. Ukufikelela kugonyo kubalulekile kubo bobabini. ”
Ngelishwa, kweli nqanaba lobhubhane, ukungalingani kokugonya kuyaqhubeka apho nangaphezu kweedosi ezingama-6 zezigonyo ezisasaziweyo, uninzi lwezi zikumazwe anengeniso ephezulu kanti awona mazwe ahlwempuzekileyo anabantu abangaphantsi kwe-1% yabemi abagonyiweyo. Siyavuma ukuba ugonyo olulinganayo lwehlabathi aluyonyanzelo yokuziphatha kuphela kodwa lukwabonisa imeko yezoqoqosho yexesha elide. Ngokunikwa uphawu lobhubhane, kunye ne-COVID-19, ngakumbi, akunakubakho ukhenketho oluzinzileyo noluzinzileyo lwehlabathi apho amazwe anengeniso esezantsi eshiye ngasemva. Esi sisiseko se-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo-hleze silibale. Ngokuphathelene noku, siyazamkela kwaye sinombulelo ngezipho zezitofu ezisuka kumaqabane ethu aphuhlileyo kwaye singagxininisa ukuba ezi kufuneka zibe zizipho ezisexesheni nezisebenzayo, kuthathelwa ingqalelo imihla yokuphelelwa kwezitofu zokugonya.
Ngokwe-UN World Trade Organisation's (UNWTO) ekuqaleni kwale veki, ukukhutshwa okugonyelweyo okuthe gabalala komhlaba ibiyenye yeempawu zokuphinda kunandiswe kukhenketho lwamazwe aphesheya ngoJuni nangoJulayi 2021. Uhlelo lwamva nje lwe-UNWTO World Tourism Barometer lubonisa ukuba kuqikelelwa ukuba ngama-54 Isigidi sabakhenkethi bawele imida yamazwe aphesheya ngoJulayi 2021, behla ngama-67% ukusukela ngoJulayi 2019, kodwa ezizona ziphumo zomeleleyo ukusukela ngo-Epreli 2020.
Abathunywa bam bonwabile ukuqaphela ukuba ingingqi yethu yaseMelika ibone ukwehla okuthe ngcembe kubakhenkethi bamazwe aphesheya abafika kuma-68% kuneminye imimandla, kunye neCaribbean ibonisa owona msebenzi mhle phakathi kwamacandelwana ehlabathi. Ezi ziindaba ezikhuthazayo ukukhanyisa indlela yethu eya phambili ukuze siqhubeke nokubuyela kwimeko yesiqhelo. Njengoko uMlawuli-Jikelele u-Ikonyo-Iweala woMbutho wezoRhwebo weHlabathi wathi, "ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kwezoqoqosho kunye norhwebo kunokufezekiswa kuphela ngomgaqo-nkqubo oqinisekisa ukufikelela okukhawulezayo kwizitofu zokugonya."
I-WHO igxininise amanqanaba abalulekileyo okuphumeza i-40% yokugonywa kwehlabathi ngoDisemba 2021 kunye ne-70% ngoJuni 2022 ukuphelisa ubhubhane. Sinezixhobo eziyimfuneko, kwaye amehlo ethu kufuneka abe kumvuzo wokuphila kunye nokuphumelela kwesi sizukulwana kunye nesizayo.
Njengokuba sijongana nokwabiwa ngokungalinganiyo kwizitofu zokugonya phakathi kwamazwe atyebileyo aphuhlileyo kunye namazwe anengeniso ephantsi yoMzantsi Afrika, sijamelene nomceli mngeni ongezelelweyo wokuthandabuza isitofu sokugonya phakathi kwabanye babemi bethu. Abantu bahlala besoyika amanzi angafundiswanga, ngakumbi ngokunxulumene nempilo yabo, kwaye ulwazi olungelulo lubangela olu loyiko.
EJamaica, elinabantu abaphantse babe zizigidi ezi-3, sinikezele ngeedosi ezingama-787,602, nge-9.5% kuphela yabemi ebhalwe njengogonywe ngokupheleleyo. URhulumente uqeshe umyalezo wobugcisa ukwazisa abemi kunye nokukhuthaza ugonyo. Ubambiswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala luqinisiwe zizivumelwano eziphawulwe ziinkampani ukunceda ngokugonya kwiindawo ezithengiswa rhoqo ezinjengeevenkile ezinkulu kunye neendawo zokuthenga ukulungiselela ukufikelela kwizitofu zokugonya. Siyabakhathalela abasesichengeni phakathi kwethu kwaye malunga noku, iinkonzo zokugonya ezihambisekayo ziye zamiliselwa ukufikelela kwiindawo ezisemaphandleni nakwiintsapho ezihlwempuzekileyo, abantu abadala kunye nabantu abakhubazekileyo abanokuthi bangabinakho ukuhamba ngokulula ukuya kugonyo.
Ngokukodwa kushishino lwezokhenketho, iQela lokuGonyelwa uKhenketho lenziwe njengomnye umboniso wobambiswano phakathi kwecandelo likarhulumente (Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho) kunye necandelo labucala (iCandelo labucala le-Vaccine Initiative kunye neJamaica Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi) ukuququzelela i-COVID-19 yokuzithandela. ugonyo lwabo bonke abasebenzi bezokhenketho abali-170,000. Oku kujoliswe kuko; Kodwa ke, asinabugxwayiba njengokuba kwiintsuku zokuqala ezintathu zale nkqubo, bangaphezulu kwama-2000 abasebenzi abagonywayo.
Abathunywa bam bayayazi indima eyadlalwa "zizopolitiko zobhubhane" ezinokuthi zithintele iinzame zethu zokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Kule nkalo, ulungelelwaniso nentsebenziswano yamazwe onke ngumba obalulekileyo ekuqinisekiseni ukwamkelwa kwezitofu ezikhuselekileyo nezisebenzayo ukuze kungacalulwa ngokungekho mthethweni ukutofelwa kunye nokuhamba. Ndinqwenela ukuphinda le ngongoma kucalucalulo. Ubhubhane ubonakalisile kwaye wandisa ukungalingani okukhoyo naphakathi kwamazwe. Imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zethu kufuneka zijolise ekukhuseleni ubomi kunye neendlela zokuphila zokuphucula umgangatho wobomi kunye nophuhliso oluzinzileyo.
Ukhenketho njengorhwebo lweenkonzo lubaluleke kakhulu kumazwe aseCaribbean naseMelika ngegalelo lawo kwingqesho, i-GDP kunye nokuveliswa kwemali yamanye amazwe. Njengecandelo elinabantu abaninzi nelifuna abantu abaninzi, iinzuzo zethu kunye nelahleko yethu zibonakale lula kuncumo kunye nokuncwina kwabasebenzi bethu kunye nabakhenkethi bethu. Ukuba sibeka abantu phambili, sinokufumana indlela kodwa ngentsebenziswano nentsebenziswano kuwo onke amanqanaba.
URhulumente waseJamaica uyakuphinda ukuzibophelela kwakhe kwimigaqo ye-multilateralism kuMbutho wamazwe aseMelika (i-OAS) nakwiminye imibutho yamanye amazwe. Asisoze safumana ipolisi yokugonya ngaphandle kokubambisana. Asisoze sikubone ukubuyiselwa okusebenzayo ngaphandle kwentsebenziswano. Ndibiza onke amazwe amelwe namhlanje ukuba athathele ingqalelo ubunyani kunye nendlela esinokuthi sisebenzisane ngayo ukuze somelele kwaye somelele ngakumbi.